Myanmar-India Business Summit dia manondro fiaraha-miasa amin'ny fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Myanmar-India Business Summit dia manondro fiaraha-miasa amin'ny fizahan-tany
Mihabe ny fifandraisana eo India sy Myanmar amin'ny fizahan-tany.
Ny konsily jeneraly mitsidika an'i India Andriamatoa Nandan Singh Bhaisora ​​dia nanisy fifamatorana ny fifamatorana, ny fifanakalozana ary ny fifandraisana eo amin'ireo mpifanila vodirindrina roa mandritra ny Fihaonana an-tampon'ny raharaham-barotra Myanmar-India sy ny foara fivarotana natao tao amin'ny lapan'ny tanàna tao Sagaing, Myanmar ny 11 Janoary.
Ny Consulat Général de India, Mandalay niara-niasa tamin'ny Antenimieran'ny varotra sy ny indostria any Sagaing, ny Fikambanan'i Indo Myanmar, ny Filan-kevitry ny fampandrosoana ny indostria Manipur, Manipur dia manao "Fihaonana an-tampon'ny raharaham-barotra any Myanmar-India sy foara fivarotana" ny 11-12 janoary.
Solontena 30 mpikambana ao amin'ny mpitarika orinasa malaza avy any Manipur, misahana ny sehatra samihafa no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Ireo solontenan'ny orinasa ireo dia avy amin'ny sehatra samihafa toy ny fambolena, voankazo sy legioma, fikarakarana sakafo, asa tanana, asa-tanana, vokatra vy sy vy, serivisy ara-bola, fahasalamana, fanabeazana ary fizahan-tany.
Nandritra ny lahateniny tamin'io hetsika io, ny Konsul Jeneralin'ny India dia nidera ny fifamatorana India-Myanmar.
Ity manaraka ity dia dika mitovy amin'ny kabary nataon'ny Consul General of India Andriamatoa Nandan Singh Bhaisora.
Miarahaba anao rehetra amin'ny anaran'ny Kaonsily India, Mandalay, amin'ity fihaonambe eto India -India Business Summit sy Trade Fair, izay karakarain'ny Consulat India, Chambre Drafitra sy Indostrian'ny Distrika Sagaing, Fikambanana Indo-Myanmar , Imphal, Manipur ary diplomasia ara-toekarena ary fizarana fanjakana ao amin'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny ao amin'ny governemanta India.
Misy mpanohana sy mpiara-miasa isan-karazany amin'ny lafiny roa. Androany dia delegasiona lehibe iray misahana sehatra samihafa - vokatra fambolena- legioma sy legioma, fikarakarana sakafo, asa tanana, asa-tanana, vokatra vy & vy, entana an-tongotra, serivisy ara-bola, fitsaboana, fizahan-tany sns avy eto Manipur, India.
Ny faritra Atsinanana Atsinanana any India dia manana karazan-vokatra marobe; Manipur dia manana indostrian'ny volotsangana, tanany, zavamaniry manitra sy fanafody, fambolena hortikultura, asa-tanana, famokarana landy, loharanon-karena voajanahary betsaka, mety ho indostrian'ny famokarana herinaratra, toerana fizahan-tany, hopitaly tsara; ny orinasa miaraka amin'i Myanmar amin'ny sasany amin'ireo vokatra ireo dia efa mandeha fa tsy amin'ny ambaratonga tokony hitranga. Tamin'ny faha-13 Jona ihany ary tamin'ny 19 desambra 2018 lasa teo dia nikarakara hetsika tambajotram-pifandraisana toy izany izahay tao amin'ny Hall MRCCI, Mandalay niaraka tamin'ny fanohanan'ny Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria ary ny MRCCI. Izaho koa dia nivory tamin'ny volana oktobra 2018 niaraka tamin'ny Sagaing Industrial Zone sy ny SDCCI ary hitako fa misy faritra maro izay ahafahan'ny mpitarika orinasa avy any amin'ny faritra Sagaing mifanerasera amin'ireo avy any Manipur ary nangataka azy ireo aho mba hitondra delegasiona any Imphal mandritra ny Fetiben'ny Sangai. Faly aho mahita fa nandeha ny delegasiona ary nisy hetsika fandraharahana iray izay ny Lehiben'ny Minisitra mendri-kaja ao amin'ny Faritra Sagaing sy Manipur no Lehiben'ny vahiny; azo antoka fa ny mpitarika orinasa avy amin'ny andaniny sy ny ankilany dia nanao fifandraisana sarobidy sasany nandritra io fivoriana io.
Ny tanjon'ny fivorian'ny orinasa anio dia ny hanohizana ny fifandraisana eo amin'ireo mpandraharaha mpandraharaha amin'ireo firenena roa tonta ao amin'ity sehatra iraisana tsara ity; azo antoka fa hanatsara ny fahatsiarovan-tena izany, hanampy amin'ny famoronana tambajotra akaiky kokoa ary hampiroborobo ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra eo amin'ny firenentsika roa. Misy ny tombony sy ny sehatra lehibe ho an'ny fiaraha-miombon'antoka sy ny varotra ary ny fampiasam-bola amin'ireo sehatra ireo ary koa ny sehatra hafa toa izany - indostria agro, solika sy gazy, herinaratra, fitaterana, trano, fifandraisan-davitra, IT, famokarana fiompiana, vokatra fanjonoana , fizahan-tany ara-pitsaboana, teknolojia lamba, fananganana, famokarana, fotodrafitrasa, indostrian'ny fiara, simenitra, gazoala, vatosoa sy firavaka sns.
Noho ny maha-akaiky ny jeografia, ny tantara taloha, ny fifandraisan'ny kolontsaina, ny fomban-drazana sy ny zavatra iainana mahazatra, ny fomban'ny ASEAN, ny fifanakalozana olona sy olona matetika dia teo anelanelan'ny Myanmar sy Avaratra Atsinanan'i India. Ny fitsidihan'ny praiminisitra Shri Narendra Modi tamin'ny taon-dasa dia nitondra ny fifandraisanay roa tonta tamin'ny toerana avo lavitra. Tamin'ny volana Janoary ihany, tamin'ny Andron'ny Repoblika lasa tamin'ny taon-dasa, ny Mpanolotsaina an'ny fanjakana dia tao New Delhi ho an'ny fihaonambem-pahatsiarovana ASEAN-India; Madam Aung San Suu Kyi dia nilaza fa ny fifandraisana Myanmar-India sy ny fifandraisan'ny ASEAN India India dia nifamatotra tamin'ny fomban-drazana nifandray akaiky hatrizay, izay karazana fifandraisana eo amin'ny faritra misy itoviana amin'ny kolontsaina. Ho an'i India, Myanmar no vavahady atsinanana izay hampifandray an'i India amin'ny faritra ASEAN; Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny ASEAN, Myanmar no Western Gateway izay hampifandray ny faritra ASEAN amin'i India. Raha lazaina amin'ny teny hafa, Myanmar no tetezana anelanelan'ny India sy ny ASEAN.
Volana vitsivitsy monja tamin'ny volana aprily lasa teo, ny minisitry ny raharaham-bahintsika dia nanao sonia MOU fito nandritra ny fitsidihany ny NPT ary iray amin'ireo MOU manan-danja indrindra dia ny fifanarahana momba ny fiampitana sisintany, - mari-pamantarana eo amin'ny fifandraisanay roa tonta, mampitohy ny sisintany iraisampirenena eo anelanelan'izy roa. nosokafana ny firenena tamin'ny 8 aogositra lasa teo ny firenena izay ahafahan'ny olona avy amin'ireo firenena roa ireo hiampita ny sisintany miaraka amin'ny pasipaoro sy visa; izany dia nanome tosika lehibe ny fifandraisanay raha ny resaka varotra, fizahan-tany, fifanakalozana ara-kolontsaina ary olona ampifandraisin'ny olona. Betsaka ny hetsika atao amin'ny lafiny roa amin'ny sisin-tany. Mazava ho azy fa Manipur sy Sagaing Region dia manana ny fahafaha-mivoatra ho lasa lalantsara ara-toekarena eo amin'ny firenentsika roa tonta satria samy mifandray amin'ny alàlan'ny sisintany iraisan'ny firenena roa tonta.
Ny fitsidihana nataon'ny Filoha mendri-kaja indiana vita soa aman-tsara dia nanamafy ny fomban-drazana ny fifandraisana avo lenta eo amin'ireo mpitondra antsika izay tsy ny roa tonta ihany fa ny sehatry ny varotra, ny fampiasam-bola, ny kolontsaina, ny olona ifandraisana amin'ny olona. Nandritra io fitsidihana io ny governemanta Myanmar dia nanambara ny fahazoana visa amin'ny toeram-pahatongavana ho an'ny karana, azo antoka fa hampitombo ny varotra fizahan-tany izany satria ny praiminisitra antsika dia efa nanambara toerana fanaovana visa gratis ho an'ny olom-pirenena Myanmar tamin'ny taon-dasa. Ary tiako hampahafantarina eto ihany fa manenjika ny raharaha miaraka amin'ny Minisiteranay ao Delhi izahay ho an'ny e-visa an-tserasera amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana teratany Myanmar amin'ny alàlan'ny sisin-tany: Tamu-Moreh sy ny sisin-tany.
Ny roa tonta koa dia niresaka momba ireo tetik'asa fampifandraisana isan-karazany izay antenainay ho vita ara-potoana; io dia azo antoka fa tsy hanamora ny fitomboan'ny varotra ihany fa koa ny fampandrosoana ara-toekarena ara-tsosialy indrindra any amin'ny Faritra Sagaing. Serivisy fitateram-bahoaka mandrindra eo anelanelan'i Mandalay & Imphal (transit ao amin'ny Tamu & Moreh Border) no dinihina ihany koa ho an'ny fivezivezin'ny olona amin'ny lafiny roa. Ity bus ity koa dia hamakivaky ny faritra Sagaing. Mila jerena ihany koa ny fifandraisan'ny rivotra - Imphal-Mandalay-Yangon-Bangkok no safidy ahafahanao manana enta-mavesatra mety ho an'ny mpandeha. Eo an-dàlana ihany koa ny fifanarahana momba ny moto.
Ry Excellencies, India izao dia iray amin'ireo toekarena lehibe mitombo haingana indrindra eran'izao tontolo izao. Tao anatin'izay efa-taona lasa izay, ny Governemanta dia nanao hetsika maromaro ary nanolotra andiana fanavaozana hanatsarana ny tontolon'ny asa any India. Ireo dingana ireo dia nanokatra fotoana vaovao ho an'ny varotra & fampiasam-bola any India. Ny fehin'ireo fanavaozana ara-toekarena ireo dia nahazo vola mitentina 60 miliara dolara avy any ivelany tamin'ny taona 2016-17. Ny orinasa avy any Myanmar dia afaka manararaotra ireo fotoana ireo amin'ny varotra sy fampiasam-bola any India - indrindra ny India Avaratra Atsinanana. Ao amin'ny Tatitry ny Ease of Doing Business Bank an'ny World Bank, 2018, dia misy fitsambikinana lehibe eo amin'ny laharana India hatramin'ny 130 ka hatramin'ny 100 ary amin'ity taona 77 ity; izay ny vokatry ny fanerena ny fanavaozana ny ekipa India sy ny sehatra maro. Tsy mora mihitsy ny nanao orinasa tany India.
Etsy ankilany, ny fanokafana ny toekarena ao Myanmar amin'ny tsena manerantany dia manamafy ny fifandraisana ara-barotra. Nisy fitomboana lehibe teo amin'ny fifamatorana ara-toekarena sy ara-barotra. Ny varotra roa tonta teo anelanelan'i India sy Myanmar dia hatramin'ny $ 1605.00 Tapitrisa dolara nandritra ny 2017-18, ny varotra sisintany dia niampita ny USD 90 tapitrisa dolara. India izao no mpampiasa vola lehibe indrindra faha-10 manana fampiasam-bola mihoatra ny USD 740.64 tapitrisa avy amina orinasa indiana 25, indrindra amin'ny sehatry ny solika sy solika. Ny varotra nandritra ny volana oktobra 2018 dia nahatratra $ 153 tapitrisa nampitomboina 60% tamin'ny volana oktobra lasa teo. Toy ny MOC eto Export to India - $ 273 ary Import avy any India $ 753 mandritra ny volana aprily-oktobra 2018.
Myanmar indrindra ny Faritra Sagaing dia manana toerana stratejika, loharanon-karena voajanahary betsaka, loharanon'olona marobe - tanora mponina ary toerana fizahan-tany maro. Izy io dia napetraka mba hampivelatra ny fifandraisan'ny tsena amin'i India, indrindra ireo faritra avaratra atsinanana. Manipur sy Sagaing Region no firenena mampifandray amin'ny firenena roa.
Amin'ity tranga ity dia tiako ny manasongadina fa ny zavatra tsapanay dia ampahany amin'ny varotra misy eo amin'ny firenena roa tonta ihany. Na izany aza, misy sehatra midadasika ho an'ny varotra, fampiasam-bola ary fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin'ny toekarena roa. Miova ny tontolon'ny asa any Myanmar, manana politika malalaka kokoa ny governemanta; ny Governemanta dia mamorona tontolon'ny asa aman-draharaha mampiadana fampiasam-bola, izay fandraisana andraikitra lehibe iray lehibe. Ny lalàna mifehy ny famatsiam-bola Myanmar izay vao napetraka tato ho ato dia misy fanovana lehibe amin'ny isan'ny sehatra nampiroborobo, famporisihana hetra amin'ny fampiasam-bola amin'ny faritra mandroso, miantoka fiarovana amin'ny raharaham-barotra, mazava kokoa ary mangarahara ny politika ara-toekarena ary ny tontolo iainana fampiasam-bola arovana.
Ny lalànan'ny orinasa dia natao tamin'ny volana aogositra 2018, mamela ireo orinasa vahiny hampiasa vola hatramin'ny 35% amin'ireo orinasa eo an-toerana, hiditra amin'ny fisoratana anarana an-tserasera - mihoatra ny 41,000 ireo orinasa voasoratra anarana ao anatin'izany ny fisoratana anarana vaovao. Ny fananganana Ministera vaovao- Minisiteran'ny fampiasam-bola sy ny fifandraisana ara-toekarena avy any ivelany dia azo inoana fa mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana tombony amin'ny asa aman-draharaha sy fampitomboana ny endrika manintona an'i Myanmar ho toerana fitadiavam-bola. Nahazo alalana ny banky any ivelany hampindrana vola amin'ny orinasa eo an-toerana amin'ny dolara amerikana sy ny vola eo an-toerana. Izany rehetra izany dia miteraka hafanam-po fanampiny ary ny governemanta Myanmar dia mikasa ny hanao fampiasam-bola maharitra ary hanome tosika lehibe amin'ny fahasalamana, fanabeazana, fitaterana ary fanamboaran-dàlana, fanovana sy fanavaozana ny lalamby, herinaratra, fizahan-tany, fandraisam-bahiny ary fotodrafitrasa ary hametraka fepetra hampisondrotra ny fampiroboroboana orinasa kely sy salantsalany hiteraka asa bebe kokoa ary ahazoana fanambinana ny vahoaka ifotony. Ny vaomiera misahana ny fampiasam-bolam-panjakana dia manana fahefana hanaiky ny fampiasam-bola hatramin'ny $ 5 tapitrisa US raha tsy miresaka momba ny MIC. Ny fampiasam-bola avy any ivelany dia tokony ho afaka hanohana ny SME, hanamboatra vokatra eo an-toerana, hiasa amin'ny faritra mandroso ary hamorona fotoana mety hisian'ny asa. Nanomboka nifantoka tamin'ny fanohanana sy fampiroboroboana ny varotra ny GOM, ary ny tanjona dia ny fampitondrana avo telo heny amin'ny taona 2020-21. Ny ministeran'ny varotra eto dia nanala ny takiana fahazoan-dàlana ho an'ny entana fanondranana sy hafarana isan-karazany mba hampiroboroboana ny varotra bebe kokoa. Fanavaozana lehibe iray hafa eo amin'ny toekarena ny fandraharahana any ivelany ary ny fiaraha-miombon'antoka dia avela ankehitriny amin'ny sehatry ny antsinjarany sy ny ambongadiny, hahasarika ny fampiasam-bola avy any ivelany izany. Fotoana mety izao- Ny mpandraharaha karana dia manana fotoana tsara hananganana orinasa iraisana sy hampiroborobo ny asa eo amin'ny firenena roa tonta.
Manentana ireo indostrian'ny indostrialy roa avy eto amin'ny firenena roa eto aho mba hitady adihevitra matotra, hanana fifanaovan-tsoa mahasoa ho an'ny tombotsoan'ny tsirairay ary hamantatra ireo sehatra azon'izy ireo iaraha-miasa na hananana vola na orinasa, anio sy rahampitso. Misaotra betsaka anao aho Andriamatoa - Lehiben'ny Minisitra Sagaing Region tamin'ny fanasoavana ny fotoana.
Manararaotra ihany koa aho misaotra ny SDCCI tamin'ny fanohanan'izy ireo tamin'ny fandaminana ity hetsika ity.
Silicon Valley mankany El Paso dia tsy mijanona amin'ny Southwest Airlines